फोटोशपमा फोटोमा बोकेह प्रभाव कसरी थप्ने क्रिएटिव अनलाइन
बोकेह प्रभाव यो ती बर्षहरूमा भएको छ जसमा टेलिफोनको केहि निर्माताहरूले घमण्ड गर्छन् जब उनीहरूले मोबाइल फोन मार्केटको लागि समाचारहरू देखाउँछन्। त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू र ती समान फोनहरू हुन् जसले यो प्रभाव मानकको रूपमा समावेश गर्दछ ताकि हामी हाम्रा फोटोहरू सामाजिक नेटवर्कहरू र नेटवर्कहरूको नेटवर्कमा साझा गर्न सक्दछौं।
जे होस् हामीसँग सधै हाम्रो Adobe Photoshop छ स्पष्ट गर्न सक्षम हुन र केहि अनुप्रयोग सुझाव भन्दा राम्रो फिनिश संग एक बोकेह प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्। यसैले हामी तपाईंलाई सिकाउन जाँदैछ कि कसरी यस्तो विशालताको यस प्रोग्राममा छविमा बोके प्रभाव थप्न, जस्तो हामीले यो ट्यूटोरियलको साथ गर्‍यौं, र त्यसले विगतका दशकहरूमा डिजाइन, चित्रण र रिचचिंगको स्पेक्ट्रम परिवर्तन गर्न सक्षम भएको छ।
कसरी छविमा बोकेह प्रभाव थप्ने
पहिले हामी गइरहेका छौं छवि डाउनलोड गर्नुहोस् जुन तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र ट्यूटोरियल अनुसरण गर्न प्रयोग गर्नुहोस् र केहि मानको साथ fiddle:
पहिलो कुरा छनौट गर्नु हो W कुञ्जीको साथ छिटो चयन उपकरण.
शिफ्ट कुञ्जी होल्ड गर्दा हामी बारम्बार छविको पृष्ठभूमिमा क्लिक गर्दछौं।
यदि हामी चयन मा जान्छौं, जब हामी जोडी को फिगर को लागी अधिक समायोजित, हामी प्रयोग गर्न सक्छौं Alt प्लस माउस क्लिक गर्नुहोस् केही सेक्सन मेटाउनका लागि.
एक पटक पृष्ठभूमि छनौट भएपछि, हामी नियन्त्रण + अपरकेस + आईको साथ चयन उल्टो पार्छौं।
अब हामी फेरि W कुञ्जी थिच्नुहोस्, र थिच्नुहोस् माथिल्लो बटनमा «चयन गर्नुहोस् र लागू गर्नुहोस् ...».
पप-अप विन्डोमा हामी ppx त्रिज्या लागू गर्छौं।
थप तल विन्डोमा, हामी "आउटपुट सेटि settingsहरू" विस्तार गर्दछौं र पठाउनुहोस् मा, हामी "लेयर मास्कको साथ नयाँ लेयर" छनौट गर्दछौं।
अहिले कन्ट्रोल + लेयरमा सिर्जना गरिएको मास्कमा फेरि क्लिक गर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् र पृष्ठभूमि चयन गर्नुहोस्।
अब हामी चयन> परिमार्जन> विस्तार> १ पिक्सेलमा जान्छौं।
उही साइटमा फर्कनुहोस्, तर हामीले फेड> १ पिक्सेल छनौट गरेका छौं।
अब हामी अपरकेस + ब्याकस्पेसले भर्ने चयनलाई जाँच गर्छौं।
अर्को विन्डोमा हामी सामग्री अनुसार सामग्री को छनौट गर्दछौं र हुन्छ मा क्लिक गर्नुहोस्.
हामी मास्कमा तह दृश्यता हटाउँछौं, र हामीले नियन्त्रण + डीको साथ चयन हटाउँदा हामी चित्रलाई राम्ररी बुझ्न सक्नेछौं।
अब पृष्ठभूमि तहमा हामी फिल्टरहरू> ब्लर प्रभाव ग्यालरी> फील्ड ब्लर छनौट गर्दछौं।
हामी केन्द्र अलि माथि सार्दछौं।
अब हामी हेड सफ्ट बोकेहमा यसलाई% 65% सम्म सार्न.
प्रकाश दायरामा हामी दुई स्लाइडरहरू १ 195 on मा छोड्दछौं।
र ब्लरमा, करीव p२ पिक्सेल।
हामी ठीकमा ब्लर लगाउँछौं। यो अन्तिम परिणाम हो:
बोकेह प्रभाव यो हामीसँग फोटोमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले यो परीक्षणको कुरा हो तपाईंले ती अन्तिम तीन प्यारामिटरहरूको साथ इच्छित प्रभाव फेला पार्नुहुन्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Photoshop » फोटोशपमा छविमा बोकेह प्रभाव कसरी थप्ने